Nkwado vidiyo na Email na-eto - na-arụ ọrụ | Martech Zone
Nkwado vidiyo na Email na-eto - na-arụ ọrụ
Tọzdee, Ọktoba 24, 2013 Tọzdee, Ọktoba 24, 2013 Douglas Karr
Site na otutu nyocha miri emi, ndi mọnk weputara ozo ihe omuma ozo di nma Ozi E-mail . Ihe omuma ihe omuma a na-enye onu ogugu bara uru banyere ihe kpatara iji vidiyo na email di oke nkpa, uzo kacha mma iji tinye vidiyo na email na ufodu akuko ifo jikọtara iji vidiyo na email.
Ihe omuma ihe omuma a gha eje ije site na nkpa nke iji vidiyo na email, udiri email vidio di iche iche, akuko ifo jikọtara ya na iji vidiyo na ozi email wdg. Email na Acid na Email Monks data na ule, ọbụlagodi 58% nke ndị ọrụ niile ga-enwe ike ịhụ vidiyo na email. 42% nke ndị ọrụ niile ga - ahụ naanị ọdịda ọdịda nke vidiyo. 55% nke ndị ahịa ahịa nwere ike iji vidiyo na email. Infographic ga-atụkwa aro ụfọdụ ọrụ kacha mma maka itinye video na email.
Tags: ozi infographicozi ahịa emailndị mọnk emailemail na acidvidiyo vidiyoemail vidiyovideo na emailvideo nkwado
Social Media Maka Ọdịmma Mmadụ